LEGOLAND Windsor ၏အမှတ်တံဆိပ် LEGO MYTHICA မြေကွက်ကိုရှာဖွေခြင်း
28 / 05 / 2021 28 / 05 / 2021 Sebastian 1166 Views စာ0မှတ်ချက် မိသားစုနေ့, Lego ဒဏ္Myာရီ, ဥပဒေ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာ 25 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, Merlin ဖျော်ဖြေရေး, ဒဏ္.ာရီ, ဒဏ္Myာရီ - ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များကမ္ဘာ, theme ဥယျာဉ်
Brick Fanatics LEGOLAND Windsor ၏ခရီးစဉ်ကိုစောစောစီးစီးကြည့်ရှုသည် Lego ယခုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်မှုမတိုင်မီတွင် MYTHICA သည်မြေနေရာချထားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံကိန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပေါင်သန်း ၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်ခုပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်ယူကေ၏ LEGOLAND Windsor Resort သည်အများပြည်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆွဲဆောင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ Brick Fanatics မေလ ၂၉ ရက်မဖွင့်ခင် MYTHICA ၏ကမ္ဘာသစ်ကိုသွားရန်အခွင့်အရေးကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဘာဘီးယားဒန်နီယယ်လ်ကိုပေါ်တူဂီကိုကျော်ပြီးကြည့်ရှုရန်နှင့်ပန်းခြံ၏နောက်ဆုံးဆွဲဆောင်မှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားစေခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောလများကယူကေတွင်ပျော်စရာအချိန်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မေလမှအားလပ်ရက်ခရီးထွက်မည်ဟုထင်ရသည့်ပုံမှန်တောက်ပသောနေရောင်ခြည်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုးရေများ၊ သူက LEGOLAND Windsor ကိုသွားဖို့ COVID မတိုင်မီကကမ္ဘာမှာနောက်ဆုံးခရီးသွားကတည်းကဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုငါစိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ။
Mythica သို့ရောက်ရန်: Mythical Creatures of World, guests ည့်သည်များသည် He မှတဆင့်စွန့်စားဖို့လိုလိမ့်မည်artအင်းအိုင် City, ကြီးမားသောကျောက်ပေါ်တယ်မုတ်ဆိတ်မွေးလမ်းဆီသို့ ဦး တည် - စိတ်မပူပါနဲ့, လက်လွတ်ဖို့ခဲယဉ်းပါဘူး။
ထူးခြားသည့်ပထမအချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရှိမီးခိုးရောင်များမှပေါ်ထွက်လာသောအလယ်အလတ်အရောင်ရင့်အုတ်များကိုထင်ရှားစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Hungry Troll စားသောက်ဆိုင်ရှိအရုပ်စာများမှသည်မြေပြင်ပေါ်ရှိသုတ်ဆေးများအထိ MYTHICA ၏အလှပဆုံးနေရာများတွင်အသုံးပြုသောအဓိကအရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီတောက်ပနီးပါးတောက်ပနေနေရာအနှံ့ကနေဆနျ့ကငျြဘ Lego ပန်းခြံ၏အများစုတွင်တွေ့ရသောအဓိကအရောင်အသွေးသည် MYTHICA ကိုမျက်နှာပြင်အောက်ရှိဝှက်ထားသောမှော်များဖြင့်ထူးခြားသောကမ္ဘာကြီးအဖြစ်ထူထောင်ရန်အမှန်ပင်ကူညီသည်။
Archway ကိုဖြတ်ပြီးသွားသည့်အချိန်တွင်သင်သည် MYTHICA ၏အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒါဟာတစ်နေရာရာအကြားကျရောက်ပါတယ် Lego အုပ်စု၏ Legends of Chima နှင့် Elves တို့သည်အရောင်အသွေးနှင့်ဇာတ်ကောင်များအထိလိုက်ဖက်သည်။ ခြင်္သေ့၊ မြွေ၊ လင်းယုန် / ငါးမန်းစပ်စပ်ကိုယ်ခန္ဓာပါသောကျောက်ပြားပေါ်တွင်ကျောက်တုံးကျောက်ပြားပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အုတ်ဖြင့်ဆောက်ထားသည့်မီးခိုးငွေ့နှင့်ထောင့်တစ်ဝိုက်နီးပါးတွင်ဓာတ်ပုံအခွင့်အလမ်းများအတွက်အခြေခံထားသောအခြားမော်ဒယ်လ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပထမပိုင်းတွင်သတ္တဝါအားလုံးနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ သို့သော်သင်eကိုသတိထားမိသည်xtra နောက်ဆက်တွဲများ, ထူးခြားသောအရောင်များသို့မဟုတ် mis- ကိုက်ညီတဲ့အတောင်ပံ။ ဤအရာသည် Frankenstein မှဖြစ်ပုံရသည် 'Lab မှသို့သော်သင်ကကလေးတစ်ယောက်မှတည်ဆောက်နေသည်ကိုသင်မြင်ယောင်မိနိုင်သည့်အတိအကျနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည် Lego.
ထိုအချက်အတိအကျပါပဲ။ Lego MYTHICA သည် ap ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်artမြေယာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ '' နောက်ဆုံးစီးနင်းအတွေ့အကြုံမှအမည်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များ '' အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည့်အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အရွယ်လူငယ်များနှင့်သူတို့၏မိဘများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများ၊ စမ်းသပ်မှုများပါဝင်သည့်မိသားစုကို ဦး စားပေးသောတီထွင်ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီ Kids Industries နှင့်မိတ်ဖက်ပြုခဲ့သည် ။
MYTHICA တွင်ဆွဲဆောင်မှုများစွာရှိသော်လည်း၊ and ည့်သည်များအတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုသည်အကြီးမားဆုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Flight of the Sky Lion သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးပျံသန်းသောပြဇာတ်ရုံစီးနင်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောကြောင့်၎င်းသည်နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သည်art 4D ရုပ်ရှင်ရုံ၏အယူအဆသစ်ကိုအမြင့်သို့ရောက်သော စာသား။
တန်းစီထဲမဝင်မီမည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ၊ ride area ride ride ride ride ride ride ride ride ride ကျွန်တော်တို့စီးနင်းရန်areaရိယာသို့မြန်မြန်ရောက်သော်လည်း although ည့်သည်တွေအများကြီးစောင့်ရ ဦး မလား။ ၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုစစ်ဆင်ရေးများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများအပြင် COVID စည်းမျဉ်းများအရအရာများကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စီးနင်းခြင်းမတိုင်မီသင်အရောင်နှင့်နံပါတ်ပေးထားသည်၊ ၎င်းသည်အမှောင်ခန်းထဲတွင် TV ဖန်သားပြင်များနှင့်စီးနင်းရန်အတွက်ထိုင်ခုံပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်ရမည့်နေရာကိုညွှန်ပြသည်။ ဗီဒီယိုတိုတိုသည်စီးနင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကလေးများကိုသူတို့တွေ့ကြုံမည့်အရာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သင်သည်အခန်း၏ဆိုင်းငံ့ထားသော 'gondolas' (LEGOLAND သူတို့ကိုခေါ်ဆိုသည့်အရာ) ရှိသည့်နောက်ဆုံးခန်းသို့'re ည့်သည်များစွာထိုင်ခုံနှင့်အတူထိုင်နေသည်။ ထိုင်ခုံများကိုရေမြှုပ်ကောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်အရင်ကတွေ့ဖူးသောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသို့သွားရန်ငါထက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။
စီးနင်း starts, ထိုင်ခုံများသည် ၁၈၀ ဒီဂရီလည်ပတ်သည်။ သင်မြင်ဖူးသမျှတွင်စွဲလန်းဆုံးမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာထိုင်နေသည်။ ၎င်းသည် IMAX ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဆင်တူသည်၊ သင်နှင့်အထက်နှင့်အောက်ဘက်ရှိမျက်နှာပြင်များအပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပတ်လည်မှအပကျန်မှည့်သည်။ ငါတို့တကယ်မြင့်နေမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ရပ်လားဆိုတာမသေချာပေမဲ့စီးနင်းမှုစတင်တဲ့အခါတကယ့်အတွေ့အကြုံကပိုမြင့်လာတယ်။
Maximus the Sky Lion ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့်သင်ထူးထူးခြားခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပျံတက်သွားပြီးသင်ပျံသန်းနေသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။ စူးစမ်းသောရှုခင်းများအားလုံး p ဖြစ်ကြသည်art Avatar နှင့် Pandora လောကနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမတူသည့် MYTHICA ၏ကမ္ဘာ၊ သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလေ၊ မိုးနှင့်ပင်အနံ့များကဲ့သို့သောသင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်ရန်အမျိုးမျိုးသောပုံရိပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ စီးနင်းပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအနည်းငယ်ပျို့ချင်သည်ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ (ငါအရင်တုန်းကလိုမျိုးဖျားနာတာကိုကိုင်တွယ်ပုံမရဘူး။ )
ငါခံစားခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောအသေးအဖွဲကိစ္စမှာ Simulator-type ဆွဲဆောင်မှုအများစုတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကအရမ်းများလွန်းနေလို့တခါတလေတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသလိုခံစားရတယ်၊ အဲဒါတွေကိုအားလုံးကိုအစာချေဖျက်ဖို့ခက်တယ်။ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်သင်သတိပြုမိသောအရာများကိုသင်မြင်တွေ့လိုဖွယ်ရှိသည်။ ငါ 3D မှာမရှိခဲ့ပေမယ့်အံ့အားသင့်စရာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေအားလုံးလှုပ်ရှားနေတာပါ။
MYTHICA သည် ၁၃ မီတာအရှည်မျှော်စင်ပုံစံဖြင့်နောက်ထပ်စီးနင်းမှုအသစ်တစ်ခုရှိသည် မီးနှင့် Ice Freefall၎င်းသည် 'freefall' နှင့် 'bounce-and rotate' စီးရီးထက်နည်းသည်။ LEGOLAND သို့အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်လိုသည့် adrenaline junkies များထက်ငယ်ရွယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေလိုသူများအတွက် ပို၍ သင့်လျော်သည်ဟုယူဆရသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အသက်သုံးနှစ်အရွယ်ပင်လျှင်လမ်းလျှောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ဟိုမှာ။
တတိယနှင့်နောက်ဆုံးစီးကား LEGOLAND ကိုပြန်လည်ပုံစံပြုသည် classic SQUID Surfer - မြင်းစီးသူရဲများဟိုက်ဒရောလစ်လက်နက်များတပ်ဆင်ထားသည့်ဂျက်လှေသီးတောင့်ပေါ်တွင်လှည့်ပတ်နေသောရေအခြေပြုအတွေ့အကြုံ၊ စတီယာရင်ဘီးမှတစ်ဆင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ယခု Hydra's Challenge ဟုအမည်ပြောင်းလိုက်သောအခါစီးသည်မပြောင်းလဲသော်လည်းအရောင်ဆန်းစစ်မှုနှင့် Duo ဟုခေါ်သည့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ပင်လယ်နဂါး၏ရေထဲမှပေါ်ထွက်လာခြင်းကစီးနင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုလန်းဆန်းစေပြီး MYTHICA အတွင်းပိုမိုစည်းလုံးစေသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောကလေးငယ်များနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ Creature Encounter သည် Bitsandbobs ဟုခေါ်သောကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော MYTHICA အခြေစိုက်ရုပ်သေးဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ရပြီး Creature Creation ကသင့်အားလက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် Lego အုတ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးပါက၎င်းသည် MYTHICA ပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုး၏အပန်းဖြေအနားယူသည့်အုတ်တံတိုင်းတွင်အုတ်တံတိုင်းပေါ်တွင်ပြသရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
မင်းရဲ့သတ္တ ၀ ါဖန်ဆင်းခြင်းဖြည့်စွက်မှုကိုအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ငါသိတယ်ငါသိတယ်၊ အဲဒါကစင်ကြယ်တဲ့အလုပ်ပဲ art.
LEGOLAND ပန်းခြံရှိဒေသအများစုနှင့်အတူ The Hungry Troll ၏အမည်အောက်တွင်အစားအသောက်များကိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏အချိန်ကာလတွင်အစားအစာအတွက်မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်သည့် MYTHICA နှင့်သက်ဆိုင်သောဒိုးနပ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နမူနာယူခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းရုံသာမကမွေ့လျော်စွာမြည်းကြည့်။ MYTHICA သို့လာရောက်လည်ပတ်စဉ်သင့်တွင်ရေစာလိုအပ်နေသည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များရရှိသည်။
အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်ခုံများရှိပြီးအဆင်ပြေစွာဖြင့်၎င်းသည်ချော်ရည်နဂါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စွန့်စားခန်းကစားကွင်းနှင့်ကပ်လျှက်ရှိပြီး၎င်းတွင်တော်တော်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောဆလိုက်ရှိသည်။ ကံမကောင်းတာကအခုဒီနယ်မြေတွေအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကြီးလွန်းနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကလေးတွေချစ်ကြလိမ့်မယ်။
MYTHICA တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကြီးမားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမော်ဒယ်များအနီးတွင်တည်ရှိသည့် Obelisks အချို့ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ပါ၊ သင်ကတိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်အတွေ့အကြုံအတွက်စကင်ဖတ်နိုင်သောအချက်များဖြစ်သည့်သင်္ကေတများပတ်ပတ်လည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ LEGOLAND Windor အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်လိုအပ်သည် (သို့သော်၎င်းသည်သင်၏အလည်အပတ်ခရီးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်)၊ သင်ကင်မရာဖြင့်အိုင်ကွန်များကိုစကင်ဖတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသင်ညွှန်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ Lego မော်ဒယ်များနှင့်သူတို့ဖွင့်လှစ်ပေါ်တယ်မှတဆင့်အသက်ဝင်လာအဖြစ်စောင့်ကြည့်။
လူတိုင်းအလွန်အမင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သတ္တဝါများသည် 'အမှန်တကယ်' ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏သားကိုပြသခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။ LEGOLAND သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် virtual ကမ္ဘာအကြားကွာဟချက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ရည်ရွယ်သောနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာကလွှမ်းမိုး။
MYTHICA သည် LEGOLAND Windsor ၏ထူးခြားသောisရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်xtraအဆိုပါ Sky Lion ၏ပုံစံအတွက်သာမန်စီး။ ဒါဟာမိသားစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများသည်နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်ဤဒဏ္thာရီသတ္တဝါများ၏ကမ္ဘာသစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာလိုကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။
LEGOLAND ၏ MYTHICA သည်မေလ ၂၉ ရက်၊
← အဆိုပါ LEGO Group နီယွန်ရောင်စုံစာသားဖြန့်ချိ
LEGO NINJAGO vlog စီးရီးအသစ်ဖြင့်ကျွန်းကိုလေ့လာပါ →
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားရဲ့ဖော်ရွေသောရပ်ကွက်ဖြစ်တဲ့ AFB ။ Lego ဟာကလေးဘဝတုန်းကအမြဲတမ်းအကြိုက်ဆုံးကစားစရာဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းလူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုမိဘများ၏ထပ်ခိုးတွင်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်မှောင်မိုက်သော အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှပြန်လှည့်မကြည့်ခဲ့ပါ။ ငါလိုင်စင်ရ themes များ p ၏ကြီးမားသောပန်ကာ particularly, DC /Marvel စူပါဟီးရိုးများ & လက်စွပ်၏သခင်ဘုရား Creator Expert ငါနှစ်သက်သော ပို၍ စိန်ခေါ်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုကိုပေးသည်။